OMN:Waltajjii Araaraa ABO fi ODP Yuuniversiitii Ambootti Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN:Waltajjii Araaraa ABO fi ODP Yuuniversiitii Ambootti
OMN: Waltajjii marii Araaraa ABO fi Mootummaa Kutaa 2ffaa (Amajjii 24, 2019)
Nothing goes unsolved under the umbrella of Gadaa system
The indigenous Gada system once after all proved to be conflict resolution system.
The gallant Abbaa Gadaas and siqqee women have played an enormous role in mediating OLF and ODP. Pertinently Abbaa Gadaa Beyena Sembeto and the restive activist Jawar Mohammed and his crew have undeniable role. Let you always remembered along side our hero and heroine.
#GadaSystem #Oromo #Oromia #Ethiopia
Oduu Ammee: Murtee Koree Teknikaa Araara ABO fi Mootummaa Itoophiyaa. Amajjii 24/2019
Koreen teknikaa araara mootummaafi ABO raawwachuuf hundaa’e har’a Amajjii 16 irraa eegale lolli gama lamaaniinuu akka dhaabatu labse.
Koreen guyyaa har’aa marii isaa magaalaa Ambootti taasisaa jiru karoora, yeroo itti raawwatu akkasumas murtii garaa garaa dabarseera.
Murteewwan kanneen keessaa:
1. Olollii miidiyaa gama lachuunu akka dhaabbatu, komiillee yoo qabaatan miidiyaaf ibsa kennuu hin danda’an
Komii yoo qabaatan koree hundaa’e qofaaf gabaasuu qabu.
2. Waraana Bilisummaa Oromoo gara kaampiitti galchuun guyyoota 20 giddutti akka xumuramu.
3. Yeroo waraanni seenu simannana ho’aa akka taasifamuuf.
4. Guyyaa waraanni galu danqaan akka hin jiraanne Raayyaan Ittisa Biyyaa guyyoota sadiif daandii akka banaa godhu.
5. Kaampiiwwan waraanni itti qubatus bakkeewwan lolli itti turerraa akka fagaatu.
6. Dhimma qabinsa waraanaa koreen teknikaa yeroo yeroon dhaqee akka hordofu.
7. Kaampii keessa ji’a lamaa ol akka hin turrellee murtaa’eera.
Marii araaraa har’aa irratti sangaan araaraa kan qalame yoo ta’u qaamoleen lamaan tiruu waliin nyaataniiru.
Walitti Qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaa Gadaan duraanii Bayyanaa Sambatuu ”araari kuni kan xumuraati, qormas qalanneerra,” jedhaniiru.
Mariin kan xumurame yoo tahu wanti hafe murtii kana hojiirra oolchuudha jedhameera.
Madda: BBC Afaan Oromoo
Lolaa fi waraana biyya keenya irraa dhaabuuf yaalii godhamaa jiruti kan gufuu ta’u hundi farra Oromoo fi Oromiyaa ti.
Alemu Sime duraanis gufuudha arraas sanuma hojjachuu jira warri kaleessaa jawar hattuu fi sobduun OPD keessaa baduu qabdi warri ummata samaa turee!
Hayyuu Seeraa: Mariin Araaraa Gumii Abboota Gadaatiin Geggeessamuun Milkaa’ina Guddaa Dha: https://t.co/zagNvaBOts
— Kichuu (@kichuu24) January 24, 2019
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi ABO Ambootti araaraman: https://t.co/zutF4DEUGZ
Oduu Ammee: Murtee Koree Teknikaa Araara ABO fi Mootummaa Itoophiyaa. Amajjii 24-2019